၂၀၁၂ လန်ဒန် အော်လံပစ် အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲမှ ဓာတ်ပုံလက်ရွေးစင်တွေ – London Olympics | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ၂၀၁၂ လန်ဒန် အော်လံပစ် အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲမှ ဓာတ်ပုံလက်ရွေးစင်တွေ – London Olympics
၂၀၁၂ လန်ဒန် အော်လံပစ် အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲမှ ဓာတ်ပုံလက်ရွေးစင်တွေ – London Olympics
Posted by PareByoke on Jul 29, 2012 in Education, Entertainment, Environment, Photography, Sports & Recreation, Travel |4comments
London Olympics Olympic Opening Ceremony
များလွန်းလို့ ကျန်တာတွေကို ကြည့်ဖို့ ရှာဖွေပေးထားတဲ့ လင့် တွေကိုနှိပ်ပါ၊
ဂုဏ်သိက်ခါရှိလှတဲ့ဒီတာဝန် ကိုလူငယ် ခုနှစ်ဦးအားတာဝန်ပေးလိုက်တာ၊
မီးအိုး ၂၀၄လုံး က ကြေးနီနဲ့ပန်းအရွက်ပုံလိုလုပ်ထားတာ၊အခြားနိုင်ငံအသီးသီးကနေသယ်လာတာ၊
စီစဉ်သူ Oscar ဆုရဒါရိုက်တာက အင်ဂလိပ်လူမျိုးတို့ရဲ့ တီထွင်မှု၊အားတက်သရော်တက်ကြွမှု၊ သဒ်ဓာ တရားကြီးမှုကို ဖော်ကျူးလိုတာ
(အာက်ကလင့်မှာ စုစုပေါင်း ပုံ၂၀ ရှိတာ
ညာဘက်အောက်နားက “Start Slideshow” ကိုနှိပ်ပါ)
BBC News – In pictures: Olympic opening ceremony
အဆိုအက အတီးအမှုတ် နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ တော်တော်များများ ပါ
BBC News – London 2012 opening ceremony in pictures
The 2012 Olympics have opened in London inaspectacular ceremony celebrating the culture of Britain and the ideals of the Games.
BBC News – Olympics 2012 opening ceremony time cut down
18 July 2012 Last updated at 18:55 ET
In nine days, thousands of volunteers will take part in the opening ceremony of the Olympic Games, an ambitious pageant directed by Danny Boyle.
But as the full-scale rehearsals get under way, the length of the ceremony has been cut by 30 minutes.
ဦးဦး ဖြားဖြား ပထမ ဦးဆုံးရွှေတံဆိပ်ကို တရုပ်ပြည်က၂၃နှစ် အမျိုးသမီး Yi Siling ရီစီလင်း ကဆွတ်ခူးတာ၊
ဒုတိယ က ပိုလန် က Sylwia Bogacka ရတာ၊ တတိယက တရုပ်ပြည် က Yu Dan ယုဒန်ကရတာ၊
[အမျိုးသမီး ၁၀ မီတာ (၃၂.၈၁ ပေ) လေသေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ]
BBC Sport – Olympic shooting: China’s Yi Siling wins first Games gold
Olympic shooting: China’s Yi Siling wins first Games gold
Yi Siling of China won the first gold medal of the London 2012 Olympics with victory in the women’s 10m air rifle at the Royal Artillery Barracks.
The 23-year-old world number one and title favourite beat Poland’s Sylwia Bogacka into second, with Yu Dan of China taking bronze.
တရုပ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း Jiangsu ပြည်နယ် က ၅၇ နှစ်အရွယ်ရှိ လယ်သမား Chen Guanming က ၂၀၁၀ မေလ ၂၃ ရက်ကစပြီး၊
လန်ခြားကို ၃ ဘီး ဆိုက်ကားလို ပြောင်းပြီး နင်းလာတာ၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ ၉ရက်မှာ လန်ဒန်မြို့သို့ရောက်လာတာ၊
မိုင်ပေါင်း ၈၇၀၀၀ နီးပါး ခရီးကြမ်း မောင်းလာတာက ၁၆ နိုင်ငံ ကိုဖြတ်ကျော်ရင်း
ရေကြီးတာ၊စစ်မြေပြင်၊တောင်ကြားလမ်း၊အလွန်အေးတဲ့ရာသီဒါဏ်တွေကိုကျော်လွှား ခံစား ခဲ့တာ၊
၂၀၁၆ Brazil ဘရာဇီး Olympic အော်လင်းပစ် သို့လဲ ဒီလိုနဲ့ဘဲသွားအုန်းမယ်လို့ပြောတာ
BBC News – Man cycles across the world from China for London 2012
When London’s mayor accepted the Olympic flag in 2008aChinese farmer who was looking on inside the stadium says he was inspired to travel to the next host city for the Games by the only way he could afford – rickshaw.
In just over two years Chen Guanming says he has travelled about 60,000km through 16 countries, overcoming floods, war zones, mountain passes and temperatures of -30C.
His aim, he said, was to “spread the Olympic spirit”.
He says he left his home on 23 May 2010 and arrived in London on9July.
John Beeston, from Norwood Green, in west London, discovered him at the top of Lower Regent Street looking “completely lost and downhearted”.
အမျိုးသမီး ၄၀၀ မီတာ (၁၃၁၂.၃၃၅ ပေ) Medley ပဒေသာ/စွယ်ဆုံ အလွတ်ကူး ပြိုင်ပွဲမှာ တရုပ်ပြည်က ၁၆ နှစ် သမီးYe Shiwen ရဲရှီဝင် က ကမ်ဘာ့ စံချိန်ကိုချိုးပြီးရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးတာ
Ye Shiwen sets new world record at Olympics … aged just 16 | Sport | guardian.co.uk
Ye Shiwen sets new world record at Olympics … aged just 16
…But she (Hannah Miley) was comprehensively outswum by China’s Ye Shiwen, the 16-year-old astonishingly settingaworld record of 4min 28.43sec. Behind her came the much fancied Elizabeth Beisel of the United States in 4:31.27. China’s Li Xuanxu was third and in fourth place was Hungary’s Katinka Hosszu.
London Olympics opening ceremony highlights – video | Sport | guardian.co.uk
London Olympics fireworks at Tower Bridge — latimes.com
အမေရိကား က အားကစား အဖွဲ့
နံမယ်ကျော် James Bond စုံထောက် ရုပ်ရှင်မင်းသား နဲ့အတူ ဘုရင်မ က လေထီး နဲ့ ဆင်းလာ သလို ဇာတ်လမ်း ဆင်တာ (ဘုရင်မ လိုဝတ်ဆင်ထားသူ အစားထိုးထားတာ)
အောက်ကလင့်မှာ စုစုပေါင်း ပုံ ၃၀ ရှိတာ
London 2012 | Summer Olympics opening ceremony – Framework – Photos and Video – Visual Storytelling from the Los Angeles Times
The opening ceremony for the 2012 London Olympics was held Friday. Here’salook at some of the pageantry.
တစ်ကယ့်ဘုရင်မကြီးအစစ် ခုန်ချတာဆိုရင်တော့ ၊ ပိုကြည့်ကောင်းမှာဘဲ
စကိုင်းနက် က ပြန်ပြပေးတဲ့
မီးရှူးမီးပန်းတွေ ကို မြင်ရတာ
ဟာ ခနဲ ဟင် ခနဲ နဲ့ ကို
ကျုပ်တို့ဆီမှာလည်း လာမယ့် ဆီးဂိမ်းမှာ
ပုံလေးတွေတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဥပကာယအထူးတင်ရှိပါကြောင်း …